पुनर्मिलन – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ५, २०७२
समीपा मेरो अगाडि बसिरहेकी छिन् । म उनको सामुन्ने बसेको छु । हामी दुवै मौन छौँ । म मूकदर्शक भएर उनलाई निरन्तर हेरिरहेछु । उनका हर क्रियाकलापमा नजर पु¥याइरहेछु । न उनी बोल्न सक्छिन्, न म बोल्न सकिरहेको छु । म कुनै प्रसङ्ग झिक्न चाहन्छु– कुरा कहाँबाट शुरू गरौँ, म अकमकिन्छु । दुवैका आँखा निरन्तर जुध्छन् र टाउको निहुरिन्छ । म दोषी झैँ आँखा भुइँतिर झार्छु ।
त्यो घर, त्यो कोठा वर्षौंअघिदेखि परिचित छ । आजभन्दा बीस वर्षअगाडि हामी यति नजिक थियौँ, एकअर्काको मायामा संसार भुल्थ्यौँ । आफैँमा हराउँथ्यौँ, कति पल सँगै बित्थे एकअर्काका सामुन्ने । घन्टा कति चाँडै काटिन्थे, तर नियतिको नियतले हामी टाढा भएपछि फेरि नजिक भयौँ । दुर्भाग्य, बितेका वर्षमा हामी अनकन्टारमा जीवनमा बाँचिरह्यौँ । हामीले आफ्नो वाचा कबुल पूरा गर्न सकेनौँ । उनले भन्दा पनि मैले उनलाई धोका दिएँ । म दोषी हँु, त्यसैले मलाई आज ज्यादै असजिलो लागिरहेछ ।
वर्षाैंका मनभित्रका छालहरु उर्लिरहेका छन्, जसले असहज अवस्था सिर्जना गर्न खोज्दैछ । उनका अगाडि उनको आग्रह म अहिले पनि टार्न सक्दिनँ । माया मर्ने कुरा होइन रहेछ, त्यो मैले अनुभूत गर्दै छु । अझैं मुटुभित्र उनको स्थान रहेछ ती उनीसँगका सुखद पलका मीठा सम्झना बाँकी नै रहेछन् । ती कोठामा टाँगिएका चित्र, पटचित्रले मलाई जिस्काइरहेको आभाष हुन्छ । संसार उस्तै छ, प्रकृतिको रङ्ग उस्तै छ । तर, कति चाडै जीवनले रङ्ग बदलिसकेछ । उनको फुलेको कपालमा आँखा अड्किरहेका छन् । वर्षौंपछि एकअर्काका नजिकमा पाउँदा मन खुशी छ, हर्षित छ तर ओठ खुल्न सक्दैनन् ।
ती कलेजका दिनहरु, ती पार्क, रेस्टुराँ मानसपटलमा सुरक्षित छन् । अनि, त्यो दुःखित मन लिएर छुट्टिएको पीडाको अनुभूति पनि । सायद्, हाम्रो अन्तिम भेट रत्नपार्कमा भएको थियो । त्यसदिन मैले असनको किराना पसलबाट उनलाई फोन गरेर भेट्न बोलाएको थिएँ । त्यतिवेला कुन बेला भेटौँ, मायाको समुद्रमा डुबुल्की मारौँ भनेर कल्पेर नै बस्थ्यौँ हामी ।
उनी पाँच बजेतिर आइपुगिन् । मनभित्र हलचल भइरहेको थियो । हिजोमात्र मेरो भिसा लागेको छ र म केही दिनमै विदेशिँदै छु, उनलाई कसरी भनौँ ! मनभित्र आँधीबेहरी चलिरहेकै थियो । हाम्रो बिछोड निश्चित थियो, केही समयपछि । तर पनि के थाहा, नियतिले फेरि भेट गराउँछ कि गराउँदैन ! मैले उनको कपाल सुमसुम्याएँ । उनी मेरो काखमा टाउको राखेर सुतेकी थिइन् । मीठा प्रेमालापहरु भए । बडो आनन्दको पल थियो त्यो । एक जवान युवक अनि सुन्दरी युवती एकापसमा मिठो स्पर्शमा झुमिरहेका छन्, संसारलाई भुलेर । दुनियाँको कुनै पर्वाह छैन, सायद् प्रेममा सबै प्राणीहरु दुनियाँलाई भुल्छन् नै । हामी त्यो पार्कभित्र पनि दुनियाँ भुलेर एक्लै थियौँ ।
वर्षौंपछिको अनायासैको निकटता । सुरूवातको भेट अनि नजिकिएको कुराबाट सन्दर्भ सुरू गरेँ मैले । उनी लजाउँदै गइन् । धेरै साथीहरु मबाट टाढा भएका कुरा मैले बताएँ । लाग्छ, त्यतिबेला उनी मेरो शरीरको आडमा सुखद भविष्यको कल्पना गर्दै थिइन् । उनले सोचेको हुनुपर्छ, उनको प्रेमसागरमा म डुबुल्की मार्दै छु । तर, मेरो मन उनबाट केही समयका लागि छुट्टी माग्दै छ । म सात समुद्रपारिको जीवनको कल्पना गर्दैछु । अन्त्यमा आँट निकालेर म विदेशिने कुरा
बताएँ । उनका आँखामा अश्रुधारा छुटे । मेरो प्रगतिको खुशीमा थियो या बिछोडमा, मैले त्यो आँसुको स्वाद पाउन सकिनँ । धेरै बेरपछि उनले बोलिन्, विवाहको कर
गरिन् । मैले उनलाई सम्झाएँ अनि नभुल्ने वाचा गरेँ । मान्छेहरु कबुल तुरून्तै गर्छन्, अनि भविष्यमा बिर्सन पनि सक्छन् । अन्त्यमा उनले स्वीकृतिमा फिस्स हाँसिन् । मेरो इच्छा र निर्णयमा उनले अरु केही गर्न पनि कहाँ सक्थिन् र ! हामी मनभरि पीडा लिएर साँझमा गह्रौँ मन लिएर छुट्टियौँ ।
व्यस्त बाटामा हिँड्दाहिँड्दै अचानक कसैले पछाडिबाट नाम काटेर बोलायो । आवाज चिरपरिचितको झैँ लाग्यो तर कसको हो, मैले अड्कल काट्न सकिनँ । रोक्किएँ, पछाडि फर्केर हेरेँ– एउटी अधबैँसे आइमाई मतिर दगुरेर आउँदै थिइन् । जब मेरो सामुन्ने उनी आइपुगिन्, उनलाई मैले चिनेँ । वर्षौंपछि पनि उनको अनुहारमा केही भिन्नता थिएन । उही नशालु आँखा, चुच्चो नाक, गुलाबी ओठ, चम्किलो अनुहार सबै उहीका उही । आँखा जुधे । उनले मेरो कुशलमंगल सोधिन् । मैले ठीक छु भनी प्रत्युत्तर फर्काएँ । बाटोमा धेरै बेर सँगै दुई जना एक्लै हिँडिरह्यौँ । बिनाकुराकानी, मैले उनको बितेको जीवनका बारेमा सोध्ने आँट गरेँ । उनले खुलस्त बताउन चाहिनन् । मैले मेरो प्रश्न अनुत्तरित नै पाएँ । अरु केही सोध्न मन लागेन ।
वास्तवमा म विदेशिएको एक वर्षसम्म त हाम्रो झन्डै दिनहुँजस्तो कुराकानी भइरहन्थ्यो इमेलमा । प्रीत बाँडिन्थ्यो त्यहाँ । दुवैलाई छुिट्टनु पर्दा बडो नमज्जा भैइरहेको थियो । जीवन निराश बनिरहेको
थियो । जब पढाइका साथै म काममा व्यस्त हुन थालेँ, जीवन बिस्तारै–बिस्तारै यान्त्रिक बन्दै गयो । वास्तवमै म दिनभरिको पढाइ र कामले निकै थाक्थेँ । हाम्रो वार्तालाप बिस्तारै–बिस्तारै घट्दै गयो । अनि, बन्द भयो ।
मैले धेरै रात भोकै निदाएको छु, कटाएको छु । जब मान्छे सबै कुरा गुमाउँदो रहेछ भन्नेहरु पैसा भएपछि सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छन्, तर वास्तवमा त्यो होइन रहेछ । मैले सबै कुरा बिर्सिएँ, त्यस कारणले सबैले मलाई बिर्सेको हुनुपर्छ । मैले धनसम्पत्तिका लागि जननी बिर्सिंएँ, जन्मभूमि बिर्सेर मायाप्रेम, स्नेह, दायित्व, कर्तव्य सबै भुलेँ– केवल आफ्ना लागि ।
कहिलेकाहीँ समीपाको सम्झनाले अन्त्यन्तै विह्वल बनाउँथ्यो, तर समय निकाल्न सकिरहेको थिइनँ, मानौँ म निकै परिवर्तित भइसकेको थिएँ । जब कोही नजिक हुन्छ, सँगै हुन्छ, मायाप्रेम र स्नेह धेरै गाढा हुन्छ अनि जब टाढा–टाढा हुँदै जान्छ, तब ती सब कुराहरु बिस्तारै–बिस्तारै फिका हुँदै जाँदा रहेछन् । पराधीन हुँदा आफ्ना इच्छा र चाहनाहरु सबै बिर्सन पर्दोरहेछ । मैले सबै कुरा गुमाएँ । मैले मेरो प्रेम हराएँ । जति–जति पैसा हँुदै गयो, मैले उतै जीवन बिताउने कल्पना गर्न थालेँ । आफैँलाई हेर्दा फर्कन मन लागेन । त्यो अभावग्रस्त सामान्यस्तरको जीवन अनि यो सहरी समाज । मैले सहर नै रोजेँ, भनौँ कि सहरले मलाइ छोड्न मानेन ।
संसारकी सबैभन्दा राम्री मेरी समीपा मेरो दृष्टिबाट हराइन् । उनीभित्र मैले अभाव नै अभाव देख्न थालेँ, मेरा लागि । मैले एउटी विदेशी महिलासित विवाह गरेँ । जीवन सुखद नै थियो, सम्पूर्ण भौतिक सम्पन्नता थियो । विवाहका एक–दुई वर्ष बडो आनन्दसँग बित्यो । त्यसपछि, बिस्तारै–बिस्तारै जीवनमा ठूलो हलचल आयो । अनि, त्यो हलचलले दुई प्राणीमा ठूलो विश्रृंखलता ल्याइदियो ।
प्रायः पुरूषहरु नारीलाई स्वतन्त्र हुन दिँदैनन् । जहिले पनि आफ्नो इच्छा र आकाङ्क्षा लाद्न चाहन्छन् । यसको अर्थ नारी स्वतन्त्र हुन सक्दिन, कुनै न कुनै पुरूषले उसमाथि हैकम चलाएकै हुन्छ । एक रात मेरी स्वास्नी नशाले लठ्ठ भएर आइन् । मेरो रिसको सीमा रहेन । मेरो पुरूषत्व नारीमाथि अधिकार जमाउन जुरूक्क उठ्यो । हामीबीच विवाद बढ्यो र त्यो क्रम निरन्तर चल्न थाल्यो । दिनहँु कोलाहल र झगडाले ठूलै रुप लिन थालिसकेको थियो । जीवनमा घटेको घटना वास्तवमै एउटा नाटकजस्तो बन्दै गयो ।
म जीवनदेखि निराश वन्दै गइरहेको थिएँ । त्यसपछि दिनहुँ बारमा गएर मध्यरातसम्म रक्सी पिइरहन्थेँ र बार डान्सरलाई अँगालिरहन्थेँ । कति रात म घर फर्किनँ । त्यो मेरो घरजस्तो रहेन । जीवनका दिनहरु बितिरहेका थिए । म झन्झन् दुर्वल बन्दै गइरहेको थिएँ । म मेरा सबै पीडा मदिरासँग भुलाउन चाहन्थेँ । तर, त्यसले मलाई झन् कमजोर बनाउँदै लग्यो ।
अचानक म बिरामी परेँ । छाती दुख्थ्यो र एक दिन त लडेँ पनि । आफैँ अस्पताल गएर जाँच गराएँ । हप्तौँ अस्पताल बसेँ । अब घर नफर्कने अठोट गरिसकेको
थिएँ । तीन महिनापछि म के गरौँ, कसो गरौँ भन्ने द्विविधामा परेँ । र, भौँतारिँदै रित्तो केवल रित्तै देश फर्किएँ । तर, म कुन मुख लिएर घर फर्कन सक्थेँ र ! म कुन हैसियतले तिम्रो सामु खडा हुन सक्थेँ र !
विमानस्थलमा ओर्लेपछि मेरो गन्तव्यको निश्चय गर्न
सकिनँ । म के गरौँ, एक मन त बहुलाएर हिडौँ जस्तो पनि लाग्यो तर त्यसो गर्न पनि सकिनँ । दुई रात सुन्धाराको गेष्ट हाउसमा बिताएँ, लगभग दस–दस घन्टासम्म सुतेर । अनि, एक दिन बाहिर निस्कँदा पुरानो मित्रसँग भेट भयो । उसकै घरतिर लागेँ । तिम्रो बारेका कुरा सबै उसैले बतायो । तिम्रो बसेको घर उजाडिएको सुन्दा म निकै दुःखित भएँ ।
म समय–समयमा मनभरि पीडा बोकी भौँतारिइरहेँ । म दिनानुदिन एकहोरो पनि बन्दै गएँ । मलाई मित्रले एउटा नोकरी खोजिदियो । त्यही दिनदेखि म बाँच्दै छु । फेरि बाँच्ने कोसिस गर्दैछु, यही सहरको बीचमा एउटा परिचयविहीन मान्छे बनेर । यसरी तिमीलाई कुनै दिन भेटौँला, मैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिइनँ ।
आकाशले आफ्नो सबै कहानी सुनायो, एउटामात्र कथाजस्तो जीवनको । समीपा सुन्दै रही । यो कुनै असामान्य घटना थिएन । आफ्नै आँखाअगाडि संसार उजाडिएको, आफ्नो मान्छेले काखमा मृत्यु वरण गरेको पीडा त सहजै भुलिसकेकी समीपाले आकाशको घटनामा कुनै दुःख व्यक्त गरिनन् । किनकि, उसैको कारणबाट जीवन दलदलमा फसेको थियो । उसले हात थामिदिएको भए जीवन फरक हुन्थ्यो, आज ।
आज फेरि भेट भएको छ, जीवनको असहज मोडमा । दुवैले जीवनका कति पल भोगिसकेका
छन् । एकअर्कालाई फेरि नजिकमा पाउँदा हेरिरहेमात्र । मनभित्र कताकता दुवैको चाहना बढ्दै थियो, तर प्रस्फुटन हुन सकिरहेको थिएन । पुनर्मिलन हुन सक्दैन आज, भिन्न जीवन छ भन्ने लागिरह्यो । बाहिर समाज पर्खाल बनेर उभिरहेको छ । धरहरा पनि सेतो आवरणमा नियालिरहेको छ । स्वयम्भूका दुई आँखा स्निग्ध, सुन्दर र शान्त
छन् । दुई प्राणी एकअर्काप्रति आशक्त छन्, तर परिस्थिति असहज छ । आँखा चार भएका हुन्, आकृति
दुई छ ।
क्रमशः दुवैको परिस्थिति उस्तै रहेर पनि होला दुवैले एकअर्कालाई फेरि आकर्षणको बन्धनमा बाँध्न सुरू गरिसकेका हुन्छन् । मन फेरि पनि पहिला झैँ नै एक भएको छ अहिले । अब उनीहरुलाई केको डर र त्रास ? दुई मायालु मनहरुले माया साटिरहेका हुन्छन्, निरन्तर । क्रमशः चारैतिर अँधेरो छाइरहे पनि मायाको सुन्दर फूल भने उज्यालो झैँ नफक्री रहन सकेन ।
भूकम्पले किन भत्काएन मेरो घर !
सर्पदंशको पर्याप्त औषधि पठाऊ